ကြောင် နဲ့ ငှက် | မိုးချိုသင်း မှတ်တမ်း
မမ Blog ကိုဖတ်တာကြာပေါ့... အခုမှပဲမန့်ရတယ်..မန့်ရတော့လည်းပထမမို့ပျော်တယ်..:)
Very nice idea and writing.
ငှက်ရဲ့ ဇွဲကြောင့် အိုဘားမားတောင် ပက်လက်လန်သွားတယ်နော်း)
ဇွဲရှိပေမယ့်လည်း ငှက်မကြီးက အပြင်မှာ ရှိနေဦးမှ။ ငှက်မကြီးပါ လှောင့်ချိုင့်ထဲ ထည့်ထားရင် ကြောင်ပြုသမျှ နုရတဲ့အခါလည်း ရှိတယ်။ အဲသည်အခါမျိုးမှာတော့ Tweety bird အော်သလို "I tawt I tawapuddy tat!" လို့ အိမ်ရှင်အဖွားကြီးကြားအောင် အော်ရတော့တာပေါ့။
ပန်လန်လက် ပက်လက်လန်စေ မယ့်အရေးတွေးသွားမိတယ်။ ထူးအိမ်ခင်ရယ် ငှက်ခေါင်းကလေး ငုံရုံလေးတင်ပါ ဆိုတာလေးတွေ သဘောကျမိတယ်။
အစ်မကြောင်တွေကို အင်္ကျင်္ီ ဝတ်ပေးထားပါ့လား။ :D
ဒါပေမယ့် အမကလေးတွေ မျက်လုံးတွေဘာတွေ ငှက်ကုတ်မယ် သတိထားဦးနော်အမ
ပြီးတော့ ဟိုချောင်းဆိုးနေတဲ့အကောင်လေး ဘယ်ရောက်သွားလဲဟင်
ဖတ်လို့ကောင်းတယ်။ အမ..ရဲ့ စာကို ဖတ်ရတိုင်း အမြဲ ပြုံးချင်စရာတော့ပါတယ်..
မမ.. အိုဘားမားလည်း ပက်လက်ကြီး လန်သွားပြီနော်....။
ဇက်တီပြောသလို အကျီင်္ဝတ်ပေးထားရင် အမွေးကုန် သက်သာမယ်.. နားကတော့ စုတ်မှာပဲနော်..။
ကြိုက်တယ် သိပ်ကြိုက်တယ်၊ အရမ်းကြိုက်တယ်။ အကျိုးနဲကြိုက်တယ်။
ငှက်မြင်ရင် ဘဝအဆက်ဆက်က ရန်သူမြင်သလိုဖြစ်နေ တဲ့အိမ်က ကြောင်ကိုတောင်ပြေးမြင်မိတယ်။ ငှက်ကြောင့်
ပုန်းနေရတဲ့ကြောင်ဆိုတာလေးကိုဖတ်ရတော့ အတွေး တွေများရပြန်ပါတယ်။
စစ်သလိုလို ကြောင်တွေ ကြောင်စစ်စစ်တွေ ကြောင်ယောင်ယောင်တွေ ယောင်တောင်တောင်ကြောင်တွေ
ငှက်စာဖြစ်မယ် ဒါပေမဲ့ လဒစာ။
ငုံရုံငုံတာ ဆိုသူတွေ ဆွံချင်ယောင်ဆောင်သူတွေ ရူးချင်ယောင်ဆောင်သူတွေ သာကူးတွေ ဖော်လံဖားတွေ ကိုယ့်မထိလို့ မနာကြသူတွေ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်မဲ့သူတွေ စားရလို့ ငြိမ်နေသူတွေ ကြောက်ရွံသူတွေ လည်း ဆက်နေရင် လဒစာဖြစ်မယ်။
ချိုသင်းလက်ရာနဲ့ အတွေးလေးကို သဘောကျလိုက်တာ...
တိရိစ္ဆာန်တွေဟာ short term memory ပဲ ဆိုတာ လုံးဝမဟုတ်ဖူး.. အိမ်က ရွှေငါးပိစိလေးတွေဆို ကိုယ်တို့ ညနေရုံးကပြန်လာပြီး အိမ်တံခါးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ အစာ ကျွေးတော့မယ်၊ သူတို့ စားရတော့မယ် ဆိုတာသိပြီး သူတို့အနားကို ချက်ချင်းမရောက်နိုင်သေးရင် ရေထဲမှာ လူးလာခေါက်ပြန်နဲ့ အသံမထွက် ထွက်အောင် လုပ်ကြတော့တာပဲ...
ကြောင်ကလေးတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ကြောင်အိမ်ကို ကြည့်ချင်တယ်။း)
အင်း ..မဟုတ်မှ လွဲရော ( မလွဲရင်တော့ သေချာတယ် ဟုတ်လို့ )
အဲဒီ ငှက်က ငှက်တို့ဘုရင် သိမ်းငှက် မျိုး ဖြစ်ရမယ် ။
အဟက် ကြောင် ၄ ကောင် ဆိုတာလည်း သူတို့ နဲ့ ကျ မှ တိုက်တိုက် ဆိုင်ဆိုင် ။
သိမ်း ငှက် က ရဲရင့်တယ် ။ မကြောက်ရွံ့ ဘူး ။
စူးရှတဲ့ အကြည့် နဲ့ တွေးခေါ်ပြီး ဒီကြောင် ၄ ကောင် ကို အသေခံ ပြီး ပြန်ချ မှာ ..ဆုံးရှုံး ခဲ့ ရတဲ့သူ့ သားသမီးတွေ အတွက် ဇွဲ မလျှော့ဘဲ ပြန်ချမှာ
အဲဒီ ငှက်မလေးတော့ လေးစားတယ်
ဇွဲ ဆုပေးချင် လိုက်တာ
(ချိုသင်းရဲ့ ကြောင်တွေကို မနာလိုလို့ ပြောတာ ဟုတ်ဖူးနော်.. အမှန်က မမ လဲ ကြောင်ချစ်သူပါ)
ကဲ .. ငှက်က ဇွဲ ကောင်းတော့
ကြောင်လေးတွေကိုလည်း ချစ်တယ်။ ငှက်မလေးကိုလည်း သနားတယ်။
မ ဘာရေးရေး ရသ အရမ်းပေါ်လို့အမြဲတွေးစရာ ခံစားစရာလေးတွေ ဖြစ်မိပါတယ်။..
“တကယ်တော့ ကြောင်နဲ့ ငှက်ဆိုရင် ဘယ်သူအားသာသလဲ မေးစရာ မလို၊ သူငယ်တန်း ကလေးတောင် သိပါရဲ့။ ပြီးတော့လဲ ကြောင်က လေးကောင်၊ ငှက်က တကောင်။ အင်အားချင်းကလဲ မမျှ။ ဒါပေမဲ့ ငှက်ကလေးရဲ့ ဇွဲနဲ့ တစိုက်မတ်မတ်လုပ်ရပ်က အင်အားကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့ ကြောင်တောင် ကြောက်ပြီး ပက်လက်လန်ရတဲ့ ဘ၀ ရောက်ရတာကိုး” တဲ့
ဒီအပိုဒ်လေးကို သေချာဖတ်ပြီး သေချာတွေးနေမိတယ်..
ဘာတွေ ဖြစ်သွားလဲ ဆိုတာ သိချင်သေးတယ် အစ်မရေ..း)
ငှက်မ ရင်ထဲက မီးတောက်တွေ လာဟတ်လိုက်သလိုပဲ..
အဆင်မသင့်ရင် သူပါသေသွားနိုင်တယ်ဆိုတာ သိသိချည်း...
ရဲရဲတောက် လက်စားချေ တန်ပြန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ ရှာတာ....
စာရေးဆရာကောင်းပီသလိုက်တာ ချိုသင်းရေ… မြင်တွေ့ နေရတဲ့ အဖြစ်လေးပေါ်မှာ အတွေးလေးတွေဆန့် ပြီး ဆွဲသွားလိုက်တာ အရမ်းလှတယ်… လေးစားအားကျမိပါတယ်…
မျက်စေ့ထဲတောင် တရေးရေး မြင်လာပါတယ် မမရေ။
ကြောင်တွေဟာ ရီရတယ်နော်။ ကာတွန်းကားလေးတောင် ရိုက်ချင်တယ်။
ရေးထားတာ ဖတ်ရင်းနဲ့ တိရိစ္ဆာန် အကြောင်းလို့တောင်
အမပဲ ကြားထဲက စစ်ပြေငြိမ်းရေး စာချုပ် လုပ်ပေး လိုက်ပါဗျာ...ဘယ်လို အဆုံးသတ်သွားလဲတော့
ကျနော့်အိမ်ရှင် ကြောင်လေး၂ကောင် ၀ယ်လာပြီး
အဲ့ဒါ ကျနော် အတွက် အလွန်ကသိကအောင့်
မီးခိုးကြားလေးက လူတွေရင် ပတ်ပုန်းနေတော့
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်..အိမ်ရှင်ရဲ့ အောက်ထပ်ကနေသွားရင် ချန်းကို
ငှက်ကလေးတွေ သနားပါတယ်။ ငှက်တစ်ကောင်ထဲနဲ့ သတ္တိ ရှိရှိနဲ့ လုပ်ရဲတာကလည်း ချီးကျူးစရာပဲ။ အမရေးထားတာက ကောင်းတော့ ဖတ်ရတာ မျက်စိထဲတကယ်ကို မြင်လာတာပဲ...
ငှက်လောက် သတ္တိ ရှိရင် ကောင်းမယ်...
အဖြစ်မှန်ပေါ် အခြေခံတာမို့ ဖတ်ရတာ ကောင်းတယ်ဗျာ။
အတွေးကလဲကောင်း အရေးကလဲကောင်းမို့ စာဖတ်သူကိုပါ တွေးစရာတွေ ပေးထားတယ်။ ထူးအိမ်ခင် ဆိုတဲ့ စကားလေး ကြိုက်တယ်တယ်... ရီလိုက်ရတာ.... :D
မအယ်ဆို မြန်မာဆန်ဆန်ပေးပါတယ်။ ငရွှေလို့ ။
မချိုသင်း ရေးတာ ကောင်းလွန်းလို့ ၂ခါ ပြန်ဖတ်တယ်။ ငှက်အမေကြီးကိုတော့ အားမလျော့ပါနဲ့လို့။ အမရဲ့ ကြောင်တွေကို အင်္ကျီထူထူသာ ၀တ်ထားပေးပေတော့။
အမ ချိုသင်းရေ၊ ရေးလိုက်ရင် ၂ခေါက် ၃ခေါက်ကို ပြန်ဖတ်နေမိတယ်
ကိုလူထွေးက နေ့လည်တုန်းက အလုပ်ထဲမှာ... ကြောင်နဲ့ငှက်ကို winword ထဲကိုကူး ဇော်ဂျီပြောင်းပြီး ထုတ်ဖတ်ခဲ့တာ...
ကြောင်ကလေးတွေကို မပြတ်စောင့်ကြည့်ပြီး ရီပို့လုပ်ပေးပါ မချိုသင်းရေ...
ဟုတ်ပ အမရယ်...မြန်မာဆန်ဆန် ငရွှေ လို့ပေးရော ပေါ့....သရုပ်ဖေါ်အဖွဲ့ အရမ်းကောင်းတော့ ရီရတာအူ ကိုနာနေတာပဲ...:-D
အစ်မရဲ့ အရေးအသားနောက်မှာ မျောသွားတယ်...။ အစ်မလို ဖွဖွလေး ရေးတတ်ချင်မိတယ်...။ ငှက်နဲ့ကြောင်ရဲ့ အားပြိုင်မှုနောက်ကွယ်က အဓိပ္ပါယ်တွေကလည်း များလွန်းပါတယ်...။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အစ်မရဲ့ အတွေး..၊ အစ်မရဲ့ အရေးကို လေးစားမိပါတယ်...။
သူ့ ခမျာ ကြောင်တောင်တောင်နဲ့ ပက်လက်ကြီး..
အခုတော့ ကြောင်တွေ ပလက်လန်နေပြီးလားး...
ကြောင်တွေကိုလည်း ဂရုဏာဖြစ်မိတယ်၊ ဆော့ချင်တာကိုး၊ သူတို့အပြစ်အတွက် စိုးတထိတ်ထိတ်နေနေရတာနော်၊ လူတွေလို ပြန်တောင်းပန်လို့လဲမရတော့ဘူး။ တိုက်ပွဲလေး ဘယ်တော့ ပြီးမလဲနော်။
အိုဘားမားကိုတောင် ပက်လက်လန်စေတဲ့ ငှက်ကလေးရဲ့ ဇွဲနဲ့သတ္တိကတော့ ချီးကျူးစရာပဲနော်...
ပြီးတော့ ထုံးစံအတိုင်း အမရဲ့ အတွေးနဲ့ အရေးကိုလဲ ချီးကျူးပါတယ်အမရယ်..
အစ်မ blog ကို အမြဲလိုလို ဖတ်ဖြစ်ပေမယ့် မမန့်ဖြစ်ဘူး... link ထားချင်လို့ ခွင့်ပြုပါနော်
ညီမလေးအိမ်မှာ ကြောင် ၁၇ကောင်ရှိတယ် ကြောင်တွေကလဲ ဘယ်လောက် လူယဉ်သလဲဆို ကြွက်လဲ ကြောက် တယ် ဌက်လဲကြောက်တယ် ညီမလေး ကြောင်ချစ်တယ်သာဆိုတယ် အိမ်လဲ မကပ်နိုင်တော့ အဖေကြီးနဲ့ အမေက ကြောင်တွေကို ဒိုင်ခံပြုစုတာ အခု အိမ်နဲ့ စကားပြောရင် ပိစိက ဘယ်လို ၀မ်လင်မကြီးကတော့ ဘယ်ချမ်းသာ အဖြူလေးကတော့ ဘယ်လို အပျိုလုပ်တယ် စသဖြင့် ပြောနေတာ ဘေးလူကတောင် အမြင်ကပ်လို့တဲ့ ဟီးဟီး မမကြောင်လေးတွေအကြောင်းရေးထားတာ အလွမ်းပြေ ဖတ်သွာတးယ်
မမချိုသင်းရေ.....ငှက်အမေလေးလဲသနားပါတယ်။ ကြောင်လေးတွေလဲ ကမောက်ကမဖြစ်လို့ သနားပါတယ်။ ရီဖို့လဲကောင်းတယ်
အစ်မရေ ကြောင်လေးတွေကို ZT ပြောသလို အင်္ကျီဝတ်ပေးထားလိုက်နော်။
ဒါမှမဟုတ် သူတို့ကို ဘော်ဒီဂတ် ခေါ်ထားပေးလိုက်ပေါ့။
"Cat House" lay nat "Cat Photo" lay twe yike p tin pay par lar hin? Kyi chin lo :)
Cat House lay ka lae chit sayar lay nay mhar...naw